Wednesday August 28, 2019 - 12:12:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Isbedello waaweyn oo dhanka maamulka ah ayaa lagasoo sheegayaa wadanka Yemen ee dhaca dhulka Jaziiradda Carabta.
Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in inta badan gobollada dhaca Koonfurta wadankaas ay dib ula wareegeen ciidamada xukuumadda taakta daran ee uu madaxda ka yahay Cabdi Rabih Haadi Mansuur.
Dagaallo culus oo soo bilaawday sabtidii lasoo dhaaftay ayaa kusoo biya shubtay magaalada Cadan oo ah caasimadda KMG ah ee wadanka, ciidamada xukuumadda ayaa saaka lawareegay gacan ku heynta dhammaan magaalooyinka gobollada Abyen iyo Laxaj waxayna gudaha ugaleen Cadan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al Xizaamul Amni ee taabacsanaa dowladda Imaaraatka Carabta si xun loogu jebiyay dagaalka ayna dib ugu gurteen saldhigyo ku yaal Cadan.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Yemen ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadoodu ay qabsadeen xaafadda Khoor Maksar iyo qeybaha ugu muhiimsan madaarka caalamiga magaalada Cadan ayna sii wadi doonaan howlgan ka dhan ah waxa uu ugu yeeray 'Maleeshiyaad gooni ugoosad ah'.
Dad ku sugan magaalada Zanjibar ee caasimadda gobolka Abyan ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ciidamada xukuumaddu ay dagaal kooban ku qabsadeen magaalada halka maleeshiyaadkii Imaaraatku tababaray ay ufirxadeen dhanka Cadan.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in guushii aadka u weyneed ee isbuucii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka xukuumadda ay ka gaareen dagaalka gobolka Shabwah uu usuurta geliyay in ay si buuxda ula wareegaan Koofurta Yemen sababa laxiriira gobolkan oo ah midka isku xira Waqooyiga iyo Koonfurta.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dowladda Imaaraatka Carabta oo ku aaddan guuldarrada gaartay maleeshiyaadkii ay maalgelisay kuwaas oo damacsanaa in Koonfurta Yemen ay ka hirgeliyaan nidaam gooni ogoosad ah oo hoos taga Abu Dubai.
Tobankii bishaan ayay aheyd markii ay maleeshiyaadka Imaaraatka ay dagaal afar maalmood qaatay kula wareegeen qasriga madaxtooyada magaalada Cadan iyo dhammaan xaafadaha magaaladaasi ka koobantahay.
Dagaal Culus oo ka dhacay degaanka Qaayib iyo ciidamada Galmudug oo meydad ka cararay.